Ny dindo navelan’ireo Portiogey tamin’ny hainahandro indiàna · Global Voices teny Malagasy
Vitsivitsy amin'ireo sakafo mamofompofona portiogey no atolotray ato
Voadika ny 02 Jolay 2020 5:36 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Português, Ελληνικά, 日本語, Italiano, English
Tany amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-16 ny Portiogey no nanjanaka an'i India. i Cochin no nitantana an'i India Portiogey, ary avy eo i Goa. Nandritra ireo taonjato efatra taorian'io, nanitatra ny vahohony tamina toerana samihafa tao India ry zareo Portiogey, indrindra fa nanaraka ny morontsiraka andrefan'ny firenena, sy ny avaratra-atsinanan'i Bengale ihany koa.
Nandritra io vanimpotoana io ry zareo Portiogey dia namela ny dindony tamin'ny sasantsasany amin'ny hainahandro indiàna, tamin'ny fomba roa samihafa: ny fampidirana laro sy hanitra vaovao tao India (izay ankehitriny lasa toy ny singa tsy azo ialàna amin'ny sakafo ao India ireny hanitra ireny), ary tamin'ny nampidirany ireo sakafo portiogey narafitra sy narindra hifanaraka amin'ireo fahaizamanao sy tsiron-kanina indiàna.
Ny dindo portiogey tena matanjaka indrindra dia mazava loatra fa tao Goa, izay notazonin'i Pôrtiogaly hatramin'ny 1961. Ny lakozia “katôlika’ tao Goa manokana dia manana fiaviana portiogey tena miavaka. Ilay bilaogera, Hilda Mascarenhas, no mitondra ny famaritana ilay hainahandro mampiavaka an'i Goa, ny kisoa vindaloo :
Ny anarana hoe “Vindaloo” dia avy amin'ilay sakafo portiogey “Carne de Vinha d’Alhos”, hena, izay mazàna hena kisoa arahana divay sy tongolo lay. Novaina kely ilay sakafo pôrtiogey, ka ilay divay mena dia nosoloina, natao vinaingitra (vinaingitra avy amin'ny voanio) ary nampidirina ny sakay mena avy any Cachemire nasiana zavamanitra, ary dia lasa hoe Vindaloo. Mitondra anarana hafa ihany koa izy io toy ny hoe Vindalho na Vindallo. Ny Vindaloo nentindrazana, misy kisoa, dia tena tototra hanitra sy laro, ary tsy misy ovy. Tsy misy mihitsy fety na fotoana firavoravoana lazaina fa feno sy tanteraka raha tsy ao ny Kisoa Vindaloo an'i Goa. Rehefa mihinana azy dia arahana an'ilay tsakitsaky malaza sy ankafizina be, ny sanas an'i Goa, izay karakaraina miaraka amin'ny divay vita tamin'ny voanio! Amim-pireharehana tokoa no aroso io sakafo miavaka io any an-tokantrano rehetra ao Goa, rehefa tonga ny Noely, Taombaovao ary Paska.
Gavin Harvey manampy hoe :
Lavidavitra kokoa any atsimon'i Goa, manaraka ny morontsiraka, manana sakafo marobe misy itoviana amin'ny hainahandro katôlika ao Goa ny tanànan'i Mangalore ary ny hainahandro katôlika ao Mangalore. Sakafo iray misy kisoa ary iraisan'ireo tanàna roa ireo ny sorpotel (na sarapatel), avy any amin'ny faritr'i Alentejo ao Portiogaly. Ao amin'ny bilaogy Goan Recipes, Glenn manoratra hoe :
Any amin'ny lafy iray amin'i India, misy dindo vitsivitsy tazana nentin'ireo Portiogey amin'ny fomba fahandron'ny Bengali ihany koa. Rangan Datta no mitantara amintsika ny tantaran'ny fromazy iray manokana :
Zoe Perrett manamarika hoe :
Ny Kulkuls dia azo avy amin'ny fanendasana feta mamy lavalava, novolavolaina tànana sy nomena endrika boribory kely (toy ny “coquilles de beurre”), izay matetika fafazana vovon-tsiramamy malefaka (sucre glace), dia avela ho maina. Mitovy endrika aminà kankana kely ny “kulkuls”, izay no nahatonga ny anarany ho “Kidyo” amin'ny fiteny Konkani, fampiasa ao Goa. Raha tsy “kankana” no fahitanao azy, dia azonao eritreretina ny endrika akora (akoran'atody, ohatra). Tiako ny eritreritra hoe ny anarana Kulkul/Kalkal dia avy amin'ny feo avoakan'ireny mofomamy kely ireny rehefa mifampikasokasoka ao anatin'ny sirop vita tamin'ny siramamy ry zareo, na angamba ao anaty boaty fitahirizana azy. Rehefa Noely no karakaraina ao Goa ny Kulkuls ary singa iray manan-danjan'ny Kuswar (tsindrin-tsakafo sy tsiro nentindrazana rehefa Noely ao Goa) ifampizaràna amin'ny mpifanolo-bodirindrina. Entina ihany koa izy ireny mandritra ireo fitsidihana, ‘adidy tsy maintsy atao’ amin'ireo namana na fianakaviana. […] Nisy olona nanipika hoe ny Kulkuls, raha ny marina, dia fanovàna kely natao avy amin'ireo Filhoses Enroladas portiogey, tsindrin-tsakafo rehefa Noely, miendrika horonana na paty naolana, nendasina ary nofafazana ‘sucre glace’. Araka izany dia mety hoe ireo Portiogey no nitondra ny Kulkuls niditra tao India.